အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ စက်တင်ဘာလအတွက် CPIဒေတာနှင့် လက်လီအရောင်းဒေတာကို အောက်တိုဘာ ၁၃ရက် ၁၅:၃၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်. သြဂုတ်လအတွက်လက်လီအရောင်းဒေတာများမှာ ဟာရီကိန်းမုန်တိုင်း ဟာဗေးကြောင့် မမျှော်လင့်ဘဲ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါသည်. ငွေဖောင်းပွမှုဒေတာများမှာ မြင့်တက်လာခဲ့သည်ကိုတွေ့ရပါသည်. ထို့ကြောင့် ထရိတ်ဒါများအနေနှင့် ယခုလာမည့်ဒေတာများ အားကောင်း မကောင်းဆိုသည်ကို ဂရုစိုက်စောင့်ကြည့်သင့်ပါသည်.
အမေရိကန်စီးပွားရေးအခြေအနေမှာ လတ်တလောတွင် ဈေးကွက်၏ အာရုံစိုက်မှုကို အခံရဆုံးဖြစ်နေပါသည်. ထို့ကြောင့်ဒေတာထုတ်ပြန်မည့်အချိန်များသည် USDကို သိသိသာသာ လှုပ်ခတ်စေမည်ဖြစ်ရာ အရောင်းအဝယ်လုပ်ရန် အချိန်ကောင်းများပင်ဖြစ်ပါသည်. ထို့ကြောင့် ယခုဒေတာများကိုစောင့်ကြည့်ပြီး အရောင်းအဝယ်လုပ်သင့်ပါသည်.